FANAMBOARANA NY TETEZAN’I SAMBIRANO : Tapaka mandritra ny ora 5 isan’andro ny fifamoivoizana
Eo anatrehan’ny fanamboarana lalana pk 467 lalam-pirenena fahaenina, eo amin’ny tetezan’i Sambirano mampitohy an’Ambondromamy sy Antsiranana dia tsy maintsy nandray fepetra hentitra ireo tompon’ andraikitra misahana izany. 6 décembre 2018
Tapaka tamin’ izany ary fa tsy maintsy voatery manapaka fifamoivoizana izy ireo isanandro noho ny fanamboarana tsy azo ialana. Dimy ora isan’andro ny fahatapahana ka manomboka amin’ny sivy ora maraina hatramin’ny roa ora tolakandro. Ny talata 4 desambra lasa teo no nanomboka izany ka mandritra ny fotoana tsy voafetra aloha hatreto. Manentana ny mpivezivezy mpampiasa lalana araka izany ny tompon’andraikitra mba hanaja ny fandaminana.
Mbola tsy misy aloha ny familian-dalana ahafahana mandeha lalan-kafa saingy mbola eo am-pikarohana vahaolana ny tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao. Izao no natao tsinona dia ny mba hitsinjovana ny vahoaka amin’ny fijaliana vokatrin’ny fahasimban-dalana mampikaikaika ny rehetra.